Uncategorized – Arakan Times
‘Rohingya rehabilitation project suicidal’
December 1, 2017	Leaveacomment 151 Views
Government’s decision to rehabilitate Rohingya refugees in an island of Noakhali will be suicidal, BNP Standing Committee Member Moudud Ahmed said today. “It goes against the interest of Bangladesh,” Moudud said, urging an immediate cancellation to the plan, inaprogramme at National Press Club in Dhaka. Repatriation deal with Myanmar on one end andarehabilitation project on another ...
Breaking News: Military set fire to Rohingya homes in Taungpyo Left
November 10, 2017	Leaveacomment 702 Views
November 10, 2017 AT Correspondent, Taungpyo Myanmar armed forces have set devastating fire to Rohingya homes in Taungpyo left northern village in Maungdaw north today, 10 November 2017. Source said to our correspondent, military and BGP forces went to the village and set fire to the homes of Rohingya residents forcing them leave their homes. Now the Rohingya villagers are ...
1 Rohingya baby die and2injury in elephant attack in Balu khali new makeshift
October 2, 2017	Leaveacomment 511 Views
2 October 2017 Report by Mohammed Yousuf. one newly arrived Rohingya died in wild elephant attack at Balu khali new makeshift camp in Ukhiya of Cox’s Bazar on2October at around 4.30 am. The deceased were identified as Mukarama D/O Nour islam (6 year ) Nour islam S/O Mohammed (55) and his wife Fatimabegum injury of Balu khali new ...
September 23, 2017	Leaveacomment 402 Views
#ArakanTimes Burmese ဘူးသီးတောင်မြုိ့နယ်၊ငါးရန့်ချောင်းအုပ်စု၊အနောက်ဘက်ချောင်းကမ်းနားရှိ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ နေအိမ်များကိုနယ်ခြားစောင့်ရဲ နှင့်စစ်ဆင်ရေးစစ်သားများပူးပေါင်းပြီး (၂၂. ၉. ၂၀၁၇)ရက်နေ့ ညနေ ၁:၃၀ ခန့်၌ အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ခွဲပြီးနေရာ ၃ခုကိုတစ်ချိန်တည်း တပြိုက်တည်း မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ ရိုဟင်ဂျာရွားများအား ယနေ့ချိန်ထိ ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ပြီး မိမိမွေးဖွားရာ ဇာတိမှ တဘက်နိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ တချို့ဆို ဇာတိနေရပ်မှာပင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် တန်းလျားဖြင့်နေကြရပါသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားခဲ့သော ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ထားရှိပြီး နိုင်ငံတာအကူအညီဖြင့် ကျွေးမွေးပါဆိုသောစကားသည် ယခုချိန်ထိ အသက်ဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ၊ မိကျောင်းဈေး ခေါ် ရိုဟင်ဂျာကျေးရွား ဖြင့် ၃မိုင်ခန့်ကွာဝေးသောနေရာတွင် ဗုံပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၊ လူအသေအပျောက်နှင့် ထိခိုက် သူမရှိကြောင်း မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကပြောပါတယ်။ မည်သည့်အမျိုးအစား ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ကြောင်း စုံးစမ်းနဲဆဲဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ...
AT Burmese ဗမာစကားပြော၍လူများဖမ်းသွားပြီးပြသနာဖန်တီးရန်ပြုမူ
April 6, 2017	Leaveacomment 662 Views
မောင်တောမြို့၊အမှတ်(၂)နယ်မြေပိုင်သက်ကိုင်ညှားကျေးရွာအုပ်စုသို့၃၊၄၊၂၀၁၇ခုနေ့၁၁း၀၀နာရီခန့်အချိန်တွင်ဗမာစကားပြောသောလူအုပ်တစ်အုပ်(၄၀)နီးပါးရောက်ရှိလာ၍ရွာ၌လှည့်ကင်းပတ်နေသောလူ၁၄ဦးကိုချည်နှောင်ပြီးဦးရှောမ်ရှူအာလောမ်၏နေအိမ်ပြပေးရန်ခေါ်ယူသွာကာနေအိမ်သို့ရောက်ရှိသွားလျှင်အိမ်ရှင်မနှင့်အပြန်အလှန်ပြောဆိုရင်းနေအိမ်အတွင်းသို့ဝင်လျက်ရှောမ်ရှူအာလောမ်အပါအဝင်လူ၎ဦးကိုဖမ်းခေါ်သွားခြဲ့ကသည်။ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူအနက်ဦးရှောမ်ရှူအာလောမ်(ဘ)်နော်ဇိရ်ဟူစိန်နှင့်အေဇာရ်ဟူစိန်(ဘ)ဖော်ကိရ်အာမတ်တို့ကိုဖျောက်ဆုံးပစ်စေသည်။ကျန်နှစ်ဦးကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရစေအောင်ရိုက်နှက်ပြီးလွှတ်ပေးပါသည်။ဒဏ်ရာရသူများမှာဦးဆော်ဒုလ်အာမိန်(ဘ)မာမတ်နှင့်ဦးဟာဆောင်(ဘ)ဝါဒါလီတို့ဖြစ်ပါသည်။ နောက်နေ့၈း၀၀နာရီအချိန်တွင်နယ်ခြားစောင့်များရောက်လာပြီးလှည့်ကင်းပတ်သူများနှင့်လွတ်လာသူများကိုစစ်ဆေးပြီးလွှတ်ပေးရာ၁း၀၀နာရီခန့်အချိန်တွင်စစ်တပ်ရောက်လာသဖြင့်ရွာလုံးကျွတ်လူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သဖြင့်၎း၀၀နာရီခန့်အချိန်တွင်တစ်ဖန်နယ်ခြားစောင့်လာရောက်၍အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့်တစ်အိမ်တစ်ဦးအစည်းအဝေးတက်ရန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ရိုဟင်ဂျာများကိုစစ်ဆေးစဉ်မတွေ့လျှင်BDပြေးကြေညာသောအလေ့ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောလမှာလည်းထင်းခုတ်သူတစ်ဦးကိုသတ်ခဲ့သောသက်လူမျိူးရွာနားတွင်လူသေအလောင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ဤသို့ပြုမူခြင်းသည်ပြသနာဖန်တီးရန်ကြံစည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းAT burmese newsသို့ပြောပါသည်။
Ambassador: US will continue to put pressure on Myanmar to resolve Rohingya crisis.
February 1, 2017	Leaveacomment 756 Views
AT Correspondent, Cox’s Bazar A delegation led by ambassador of United State based in Dhaka, Ms Marcia Bernicat visited the Leda makeshift and Nayapara Rohingya registered refugee camp of Teknaf on January 31, 2017. The Deputy Secretary, Fazlul Karim Chowdhury, Head of Sub-Office, UNHCR and many other representatives from different NGOs working for the improvement of refugees in the ...
January 4, 2017	Leaveacomment 748 Views
By BBC A commission set up by Myanmar’s government says it has so far found no evidence of genocide against Rohingya Muslims in Rakhine state. In its interim report, the commission also said there was not enough evidence to support widespread rape allegations. It did not mention claims that security forces had been killing people. There have been repeated ...